क्या म एक backlink लिपि को उपयोग गरेर बैकलिंक को निर्माण को लागि एक प्रक्रिया को सरल बना सकते हो?
के तपाईंले कहिल्यै आश्चर्य छ कि छविहरूबाट नयाँ गुणस्तरको ब्याकलिङ्क कसरी प्राप्त गर्ने? यो एक लिङ्क इमारत विधि धेरै वेबमास्टर्सहरू हो वा यसको शक्तिबाट अनजान छैन. यद्यपि, वास्तविकतामा, एक अनलाईन चित्र हजार हजारको लायक हुन सक्छ. पाठ आधारित लिंक इमारतमा फोकस गर्न तपाईले तपाईंलाई सबैभन्दा प्रभावशाली लिङ्क निर्माण रणनीतिहरू - छवि लिङ्क इमारतबाट छुटाउन सक्नुहुन्छ. तपाईं भ्रामक सामग्री जस्तै इन्फोग्राफिक्स, भिडियोहरू, तस्बिरहरू, र यति मार्फत धेरै उपयोगी जानकारीहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ.
आउनुहोस् हामीलाई केहि लिङ्क इमारत प्रविधिहरूमा नजिकको दृश्य लिनुहोस् जुन तपाईले छविहरूबाट लिङ्क सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ.
तस्विरहरू कसरी बनाउने भनेर ट्राफिक र ब्याकलिंकहरू कसरी आकर्षित गर्ने?
सबै भन्दा पहिले, म भिजुअल सम्पत्तिको महत्त्वको बारेमा भन्न चाहन्छु. भिजुअल सम्पत्तिहरूसँग मिल्ने शब्दहरूसँग मिल्दो शब्दहरूको तुलनामा तस्बिरहरू छन्. यदि तिनीहरू सही ढंगले कार्य गरिएमा, तिनीहरू मनपर्ने विषयमा रचनात्मकता, स्पष्टता वा नयाँ अन्तर्दृष्टिहरू प्रदान गर्छन्.
तपाईंको वेब स्रोतमा ट्राफिकलाई आकर्षित गर्न, तपाइँहरूलाई नारा लगाउनको लागी सम्भावित दृश्य सम्पत्तिहरू सिर्जना गर्न आवश्यक छ. प्रयोगकर्ताहरू केही विचित्र बयानहरू, मजाकहरू र मेमोहरू साझेदारी गर्छन्. यद्यपि, यदि तपाईं डिजाइनर हुनुहुन्न भने, यो केहि चीजहरू एकसाथ केहि समस्या हुन सक्छ. यद्यपि, त्यहाँ सधै एक तरिका हो. तपाईं सस्तो सेवाहरू जस्तै Fiverr सरल तस्वीर सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ. यसको अतिरिक्त, तपाईं आफ्नो विभिन्न gigs पा सकते हो. तिनीहरू छोटो अवधि भित्र एक उचित मूल्यको लागि तपाईंको सामाग्री टुक्रामा राम्रो सरल हास्य सिर्जना गर्न सहमत हुनेछन्. यद्यपि, यदि तपाईलाई थप जटिलता चाहिन्छ भने, त्यो व्यावसायिक दृष्टिकोण चाहिन्छ, त्यसपछि तपाईलाई घर डिजाइन गर्न भाडा चाहिन्छ.
यो भन्न गाह्रो छ कि यो छवि तपाईंको सामग्रीमा धेरै ट्राफिकलाई आकर्षित गर्नेछ वा होइन, तर यसले निश्चित रूपमा लेखको पछाडि विचार बुझ्न मद्दत गर्नेछ कि?.
इन्फ्रागोग्राफिक मार्केटिंग को काम कसरि गर्दछ?
इन्फ्राोग्राफिक ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न शक्तिशाली हतियार हो. वेबमास्टर्सहरूले यसलाई प्रयोग पाठकहरू गाउन र उनीहरूलाई ब्रान्डलाई वफादार बनाउन प्रयोग गर्छन्. साना व्यवसायहरू प्रायः इन्टरोग्राफिक्स इन्टरग्राफहरू आफ्नो सामग्रीमा घुसाउनका लागि प्रमुख बजार खेलाडीहरूबाट इनबाउन्ड लिङ्कहरू प्राप्त गर्न.
सबै भन्दा पहिले, तपाईंलाई उद्योग सम्बन्धी इन्फोग्राफिक्स खोज्न Google शोध गर्न आवश्यक छ. दायाँ सामग्री फेला पार्न निम्न प्रश्नहरू प्रयोग गर्नुहोस् - "कुञ्जीपाटी" + "infographic"; "उत्तम खोजशब्द इन्फोग्राफिक्स"; "कीवर्ड इन्फोग्राफिक्स. "त्यसपछि प्राप्त परिणामहरू हेर्नुहोस् र सबैभन्दा राम्रो खोज्नुहोस्.
यदि तपाईंको व्यवसाय केही अस्पष्ट स्थानमा राखिएको छ भने, तपाइँ केहि तस्विर निर्देशिकाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाइँ सबै कुरा फेला पार्न सक्नुहुनेछ।. सबै भन्दा प्रसिद्ध डाइरेक्टरीहरू दृश्य हुन्. ly र pinterest.
जब तपाईले उपयुक्त तस्वीर प्राप्त गर्नुभएमा, तपाइँलाई एक विषय खोज्न आवश्यक छ जुन तपाईंको आलाको लागि राम्रो काम गर्दछ।. माथि उल्लेखित प्लेटफार्महरू प्रयोग गर्दै, तपाईं डिडहरू फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ र कुन प्रकारको इन्फ्रागोग्राफहरू प्रसिद्ध हुन्छन् भनेर विचार पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।.
अर्को चरणमा, तपाईं आफ्नो डेटा एक साथ प्राप्त गर्न आवश्यक छ. तपाईँको प्राथमिक लक्ष्यको रूपमा तपाईंको संक्रमणिका धेरै आला-सम्बन्धित वेब स्रोतहरूबाट प्राप्त गर्नका लागि हो, तपाईंले आफ्नो जानकारी सावधानीपूर्वक संकलन गर्न आवश्यक छ. र जब सम्म तपाईंको डेटा प्रभावशाली छैन, यो फोर्ब्स वा हार्वर्ड मा पोस्ट गर्न को लागी संभावना छैन. edu. यद्यपि, यो तपाईंको उद्योगमा सम्मानित वेब स्रोतहरूसँग सजिलै संग जोडिएको हुन सक्छ Source .